Ụbọchị My Pet » Esi na Udidi Ịhụnanya?
emelitere ikpeazụ: Nov. 27 2020 | 2 min agụ
E nwere oge mgbe gị na di gị ma ọ bụ nwa na-enweghị enyi apụghị nnọọ na-aka anya onye ọ bụla ọzọ, ma ugbu a, ihe agbanweela na ị na o siri na-eche dị ka na-eme ka ịhụnanya. Ndi emi yiri ọnọdụ ị nọ ugbu a na-? Iji hụ na i nwere ihe dị ukwuu fun dị ka ị na-eji nwere na onye gị na mbụ, ịmụta otú ga-esi na ọnọdụ Ịhụnanya.
Mee ambiance zuru okè
Ọtụtụ di na nwunye n'oge mmalite ụbọchị nke mmekọrịta ha dị nnọọ mkpa a onwe akuku see ịhụnanya zuru okè Ndinam ọnọdụ. Otú ọ dị, dị ka mmekọrịta eto, ọ na-amalite adịkwa na amara ya otu ugboro iji na-enweta. Inwe nri ambiance pụrụ inyere ndị mmadụ na-esi n'ime ọnọdụ n'ihi na ịhụnanya na-adị mfe.
Ị nwere ike na-agbalị dimming ọkụ gị ime na-etinye ụfọdụ ihunanya music on. Jide n'aka gị bed bụghị cluttered; ọtụtụ ndị dị nnọọ ike na-eche ihunanya na imetosi gburugburu. Ekwela ka gị ime na-oke ọkụ ma ọ bụ oyi dị ka ma nwere ike ịbụ nzi turnoffs. Ọ bụrụ na ị nwere ntụ oyi ma ọ bụ kpo oku usoro arụnyere, ịgbanwe ya. Emepe ma ọ bụ na-emechi windo nwekwara ike inyere gị aka na normalizing okpomọkụ gị ime na-eme ka ebe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na na-mma.
Nchegbu bụ otu n'ime ihe ndị kasị akpata nke belata mmekọahụ mbanye. Nso nso nwetara ọnụ ọgụgụ na-ekpughe na gburugburu 15% ndị ikom nwere ala libido n'ụzọ bụ isi n'ihi nke ndị nchegbu ha nwere na ndụ. Testosterone bụ hormone na akara mmekọahụ mbanye na ndị ikom na. Dị ka a mmadụ na-amụba okenye (30 ma ọ bụ karịa), ya testosterone larịị amalite na-agbadata; nchegbu na-akpalite mmepụta nke cortisol na mbelata ya testosterone larịị ọbụna n'ihu. Ya mere, a nwoke esifịna site nchegbu na-emekarị nwere ala libido karịa ndị ọzọ na ndị ikom ya nke afọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ka azụ ebua na-achọ inwe na ọnọdụ n'ihi na ịhụnanya dị ka spontaneously dị ka ị na-eme a afọ ole na ole azụ, ị ga-ahụ ụzọ igbu ndị nchegbu onye gị na-eche ihu na n'otu oge ahụ na-onwe gị de-mesiri. Kwesịrị, ị kwesịrị ị na-enyere onye ọ bụla ọzọ na reinstating mmetụta nke n'otu site na-eti ndị nchegbu. Nye ya a ịhịa aka n'ahụ na mgbe ahụ ịjụ ya laghachi amara, na-a na-ekpo ọkụ ịsa ọnụ, na-akwadebe nri ọnụ, ịga mkpagharị n'ogige mgbe nri abalị; ndị a niile ga-enyere gị na onye gị na iji tụsaratụ na-esi na nke zuru okè ịhụnanya Ndinam ọnọdụ.
Jide n'aka na ị na-eche sexy
Iji na-eche dị ka na-eme ka ịhụnanya, ị ga-akpa na-eche sexy. Ọ bụrụ na ị na-adịghị obi ike banyere otú gị anya n'ihi na arọ ị mụtara na n'oge gara aga afọ ole na ole, agbalị kụrụ mgbatị ahụ ma hapụ ụfọdụ n'ime ya. Nke a ga-eme ka ị ọzọ nwee obi ike na ị ga-ọzọ na-amalite na-eche sexy. Ị nwekwara ike gbalịa pụta ọhụrụ lingerie, ma jide n'aka na ị na-ala na ya; nke a bụ n'ihi na nkasi obi bụkwa nnọọ mkpa maka mmetụta sexy.
Iji nweta na ọnọdụ Ịhụnanya, ị ga-eme ihe ga-kpochapụ ahuokika si mmekọrịta gị. Ozugbo mmekọrịta gị na-aghọ na-akpali akpali, ị gaghị na-esiri ike ga-esi n'ime nri etiti nke uche na-eme ka ịhụnanya.
Ihe Mere I Kwesịrị Gbalịa mkpapụ Ònye Bụ bụghị gị Ụdị